China Turnkey pcb Assembly Inogadzira uye Fekitori KAISHENG pcb
PCBFuture ikambani inotarisana nevatengi inotarisa pakupa mhando yepamusoro uye inoshanda yakagadziridzwa wedunhu bhodhi mhinduro dzemakwikwi mitengo. Tiri kukura kubva kupa vatengi pamwe chete basa pcb kutsigira nzwisisika basa nechemberi masekete, vakawanda pcb kugadzirwa, pcb gungano, zvikamu vachitenga mu pcb turnkey mhinduro.
Metal bemhapemha: Kunyudza Goridhe
Simbi Kufukidza: Kunyudza Goridhe Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 2 rukoko pcb
Solder Mhando: RoHS Inoenderana Imwe-Stop Services: Pcb Kugadzira Uye Turnkey pcb Assembly Kuedzwa: 100% AOI / E-bvunzo / Kuedzwa Kwesimba
Keywords: Misa pcb kugadzirwa pcb Assembly, pcb turnkey, pcb Assembly Vagadziri, pcb shopu imwe shopu, Yakachipa pcb Assembly, Yakadhindwa Circuit Board Assembly Makambani
Zvikonzero zvekusarudza PCBRamangwana
1. Wepamusoro unounzwa kumusoro-frequency wedunhu bhodhi mbishi zvigadzirwa kuti uve nechokwadi chehunhu chigadzirwa kubva kunobva.
2. Iyo yakazara seti yemvura yekurapa michina inogona kusangana nezvinodiwa zvemaindasitiri akasiyana siyana.
3. Inotungamira pcb Multilayer Dunhu Bhodhi hunyanzvi kugona.
4.Strict pcb mhando kudzora system kunyatso kuvimbisa chigadzirwa kuita.
5. Wepamusoro Unyanzvi Chikwata.
6. Zviwanikwa Zvinobatsira.
Kuburikidza mugomba pcb gungano
Mid vhoriyamu pcb gungano
Chii chinobhadharwa mutengo wako?
We achakupa iwe Pricing kuti pcb gungano. Mitengo yegungano rePBB inosanganisira tooling, matemplate esolder uye basa reboka kurodha zvinhu. Yedu yekutendeuka-kiyi makotesheni zvakare anoratidza chikamu chemitengo sezvakaratidzwa. Isu hatibhadharise mari yekumisikidza kana mari yeNRE yegungano.
Ndeipi nguva yekutungamira pane yekuchinjisa-kiyi odha?
Iyo yakazara purojekiti Yekutungamira Nguva ndeye iyo huwandu Zvikamu zvekutenga zvinotungamira nguva uye PCB Assembly kutungamira nguva. Nekudaro, isu tinoedza kupfupisa nguva yenguva nekudzora yedu PCB gungano Maitiro. Semuenzaniso, kana tangogamuchira yako Gerber Files yePBB yekugadzira uye BOM yegungano rePCB, isu tinotanga kugadzirira stencil yebhodhi rako uye kupedzisa iyo yekuumba panguva imwe chete nezvikamu zvekutenga.
PCBFuture inokusevha nguva kana mutengo uye inoderedza zvinogona kuitika kuti uwane basa rekusanganisira vatengesi vakawanda. Isu tinotsigira nekukurumidza kutendeuka pamwechete yakajairwa nguva yekuendesa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi. Tine timu yakasimba ine mamaneja akasimbiswa kuona mhando yemabhodhi edunhu.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, ndapota inzwa wakasununguka kubata sales@pcbfuture.com , isu tichakupindura iwe ASAP.
Pashure: Hwendefa PC Turnkey pcb Magetsi Assembly
Zvadaro: Vehicle Kudzora Circuit Bhodhi Gungano
Vhidhiyo Decoder Dunhu pcb Assembly
Smart Controller Bhodhi Magetsi Musangano Ser ...